घरको छतमा पुग्यो जंगली हात्ती: अब कसरी ओर्लिएला भुँइमा ? (भिडियोसहित) – Jagaran Nepal
घरको छतमा पुग्यो जंगली हात्ती: अब कसरी ओर्लिएला भुँइमा ? (भिडियोसहित)
एजेन्सी । कहिले काहीँ सामाजिक सञ्जालमा अनौठो खालको भिडियो सार्वजनिक हुन्छ । मानिसलाई हैरान गर्ने खालका भिडियोमा उठेका प्रश्नको उत्तर फेला पर्दैन । यस्तै एउटा भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । भिडियोमा घरको छतमा हात्ती पुगेर घुमिरहेको देख्न सकिन्छ ।
भारतीय वन विज्ञानका अधिकारी बस्ने घरको छतमा एक्कासी जंगली हात्ती देखिएको छ । छतबाट रुखको घाँस खाइरहेको दृश्य अहिले भाइरल बनेको छ । यो हात्ती कसरी छतमा पुग्यो ? भन्ने आम मानिसमा प्रश्न छ । सानो सिडीबाट छतमा पुगेको हात्ती भुँइमा ओर्लिन सकेको छैन ।
यो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । धेरैले यो हात्ती कसरी भुँइमा आउँछ भनेर प्रश्न गरेका छन् । वन विभागका कर्मचारीले पनि यसको उत्तर दिन सकेनन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले ठूलो खालको क्रेनको सहायतामा घरको छतबाट हात्तीलाई भुँइमा निकालिएको केही सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
Elephant in the room has become quite old…
So we now have elephant in the roof😊
🎬In the clip pic.twitter.com/aVYduBcoL8